ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခရီးစဉ် မှတ်တမ်း
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခရီးစဉ်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက် ၁။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက်နေ့ နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီ၌ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ဦးစီးအရာရှိများမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈)ဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးမော်သန်းတက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းလမ်းညွှန်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ၂။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သင်တန်းကထိက များနှင့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ ( ၇၈ ) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Auditor General of Norway visited Myanmar
Mr. Per-Kristian Foss, the Auditor General and Mrs. Gry Anette Midtbo, the Deputy Director General, of the Office of the Auditor General of Norway visited Myanmar from 4th to 6th December 2018 to hold high level discussions on cooperation and ongoing programs in line with the MOU signed between the Office of the Auditor General of the Union and the Office of the Auditor General of Norway. The delegation arrived in Yangon on 4th December and visited Norwegian Embassy.
ဦးစီးအရာရှိများ မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
The Auditor General of the Union received the delegation from EU/GOPA led by Mr. Thomas Thomsen, Consultant
1. U Maw Than, the Auditor General of the Union, received the delegation from EU/GOPA led by Mr. Thomas Thomsen, Consultant, at the Office of the Auditor General of the Union, Nay Pyi Taw at 10:00 a.m on 7th December, 2018. 2. In this meeting, they discussed the matters of Legal Mandates, the performance status of National Legal Expert, ongoing schedules of cooperation regarding Legal Mandates, Human Resources and Pilot Financial Audit between the Office of the Auditor General of the Union and EU/GOPA.
Providing Information on Financial Audit ISSAIs Discussion Forum Website Link
The Financial Audit and Accounting Subcommittee (FAAS) which was established under Professional Standards Committee (PSC) of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) launched the “Discussion Forum” that SAIs implementing financial audit ISSAIs can participate in. The SAIs can ask questions to FAAS on issues related to adoption and implementation of financial audit ISSAIs via “Discussion Forum” at: https://www.intosai-faas.org/discussion-forum.html.